UApple uthatha i-InVisage ukuphucula ikhamera ye-iPhone | IPhone iindaba
I-Apple ithatha i-InVisage ukuphucula ikhamera ye-iPhone
UAlvaro Fuentes | | iPhone, Izaziso
iapile ufumene qalisa inikezelwe kwiimpawu zekhamera ibizwa ngokuba yi-InVisage Technologies, njengoko kuchaziwe TechCrunch. I-InVisage ichukumisa isivamvo sayo somfanekiso weQuantumFilm kwaye igxile ekubambeni ukukhanya kusetyenziswa imodyuli yekhamera encinci.
Apha ungafunda inkcazo emfutshane yetekhnoloji eyenziwe yi-InVisage kwaye yeyiphi ngoku iApple.
I-QuantumFilm ngumaleko wefotosensitive osekwe kwiklasi entsha yezixhobo eziyilwe yi-InVisage yokufunxa ukukhanya; Ngokukodwa, into entsha yenziwe ngamachaphaza e-quantum, ii-nanoparticles ezinokusasazeka zenze igridi xa sele zidityanisiwe. Njengepeyinti, oku kusasazeka kwezinto eziqinileyo kunokufakwa kwi-substrate kwaye kuvunyelwe ukuba kome. Kwipikseli ye-QuantumFilm, ukukhanya kudlula kuluhlu lweefilitha zemibala kwaye emva koko kufunyanwa ngamachaphaza e-quantum kumaleko we-QuantumFilm. Iingcingo zentsimbi zimela isekethe yombane yoluvo. Indawo ephezulu yomaleko wefotosensitive ivumela i-pixum ye-QuantumFilm ukuba ibone ezinye iifotoni, igcine ii-elektroni ezininzi (kwaye ke ulwazi oluninzi lokufota) kwaye iphinde ivelise imibala ngokuchanekileyo, zonke zinemodyuli yekhamera encinci.
Njengoko iApple iqhubeka nokugxila ekuphuculeni umgangatho wekhamera ye-iPhone minyaka le, kulula ukubona ukuba zeziphi izicwangciso zika-Apple faka le teknoloji kwizixhobo zakho.
I-Apple okwangoku ixhomekeke kubathengisi beekhamera zayo, kodwa isebenzisa iprosesa yayo yangaphakathi yesignali yomqondiso ukulawula iisenzi. Ngokusekwe kwinkcazo yetekhnoloji ye-InVisage, Unokucinga ukuba iApple iphuhlisa iimodyuli zayo zekhamera Ezimeleyo zibonakalisa ukukhanya kwimizimba ebhityileyo. Ngokuqinisekileyo iya kuba yinkqubela phambili yekhamera yefowuni ka-Apple kwaye abasebenzisi bayo bayayixabisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » I-Apple ithatha i-InVisage ukuphucula ikhamera ye-iPhone
I-iPhone X ene-iOS 11.1.1 sele inedemo yayo yokuqala ye-Jailbreak
I-Apple, ifutshane ekufikeleleni kwixabiso le-trillion yeedola